China oluzenzekelayo SMC Imveliso Line SMC umatshini sheet sheet yokubumba ezimbaxa Ukwakha kunye Factory | Zhengxi
Umatshini wokuvelisa umgca we-SMC ozenzekelayo we-SMC
Inkqubo yokulawula i-1 ilawulwa yinkqubo ye-PLC, enokuqonda ukulayishwa okuzenzekelayo.
2. I-resin iqala ukufakwa ngokwexabiso lefomula ebekwe yinkqubo, kwaye iyanqunyanyiswa ngokuzenzekelayo xa kufikelelwe isixa sefomula, emva koko ime ngokuzenzekelayo xa iarhente yokuncipha ephantsi ifakwa kwifomula.
Ngokupheleleyo oluzenzekelayo nentlaka Ukuxuba Iimpawu
1. Inkqubo yolawulo ilawulwa yinkqubo ye-PLC, enokuqonda ukulayishwa okuzenzekelayo.
2. I-resin iqala ukufakwa ngokwexabiso lefomula ebekwe yinkqubo, kwaye iyanqunyanyiswa ngokuzenzekelayo xa kufikelelwe isixa sefomula, emva koko ime ngokuzenzekelayo xa iarhente yokuncipha esezantsi ifakwa kwifomula.
3. Isango lokutyisa intlaka, izibuko lesondlo esincinci se-arhente kunye nezibuko lokutya kwe-styrene, izibuko lokutya lokugcwalisa ligcinwa kwiKetile evuselelayo.
4. I-PLC inokugcina iiresiphi ezininzi ezahlukeneyo ze-SMC, ezinokusetyenziswa ngenani.
5. Iketile evuselelayo yenziwe ngentsimbi engama-201 engenazintsimbi ukuze ihlale ixesha elide.
6. I-resin ihanjiswa kusetyenziswa impompo yegiya yokungenisa elizweni okanye impompo yokujija enezinga lokuhamba kwe-4-6 cubic metres ngeyure.
7. Zombini iiKetile ezishukumisayo kunye netanki lokugcina intlaka zineempawu zokujonga ubushushu zokujonga ubushushu be-resin paste.
8. Ukutya kwe-calcium carbonate yindlela yokudlulisa i-vacuum, kwaye ixesha lokutshaja kwi-calcium carbonate nganye limalunga nemizuzu eli-10.
Ngokupheleleyo Line Production Line Ukuxuba System System
1.Yenziwe ngeeseti ezintathu zeepompu zegiscosity ephezulu, abaxube kunye neenkqubo zolawulo zombane
2. Iimpompo zika-A, B, no-C ziqhutywa zii-servo motors. Kwimeko yemveliso, iimpompo ze-B kunye no-C zilandelela impompo engu-A ukwenza ulawulo oluvaliweyo, kwaye zixhotyiswe ngemitha yokuhamba ngobuninzi ngokuchaneka kwamawaka amathathu.
3. B, C impompo iza nombhobho wokukhupha, umthamo ziilitha ezili-100 kunye neelitha ezingama-50
4. Iimpompo zika-B no-C zonke zithuthwa yimpompo yokubala imitha ye-US Weiken. Impompo isebenzisa impompo ye-Wicken gear okanye impompo yokujiya engeniswayo. Iimpompo ze-A, B, kunye no-C zixhotyiswe nge-flowmeters zokujonga inqanaba lokuhamba kwenxalenye ye-resin paste ye-magnesia kunye nombala wokuncamathisela. Xa naliphi na icandelo A, B, no-C liphazamiseka, inkqubo ekwi-Intanethi iyayeka ngokuzenzekelayo.
Umgca weMveliso ye-SMC
Ifilimu uMax. ubukhulu
Ububanzi beSMC Sheet
Intlama yokuncamathisela i-viscosity
Umxholo weFiber 10% -40%
Inani leentsinga zeglasi
1 / iseti
Ifayibha kwiintsali isixhobo efanayo
Isantya sendawo yokudipha
Ukuntywila ububanzi bebhanti enemingxuma
Ukuntywila ubude bommandla
Indlela yokufaka umbala kunye neMGO
Umatshini weShidi we-SMC-1200
Iketile ka-2000L evuselelayo (2 iiseti zee-22KW iinjini kunye neeseti ezi-2 zokunciphisa)
Isantya esiphezulu se-22KW kunye ne-150L yokuHlanganisa iDrum (intsimbi engenasici)
Isasazi esinejubane eliphezulu
Imitha flow ngobuciko High
Egqithileyo Umatshini embossing emnyango
Okulandelayo: Umgca wemveliso oluzenzekelayo
Impompo yokulinganisa umlinganiso
I-USA VIKING / iFransi PCM